ESI GBANWEE ONYE ỌRỤ NA SKYPE - SKYPE - 2019
Onye ngbanwe Skype gbanwere
Ihe ngosi nke PuTTY na ihe omuma ya mere ka nnukwu ngwa ngwa nke ngwa ngwa nke PuTTY ma ọ bụ mmemme ya, ma ọ bụ mmemme na-eji koodu ntinye nke ngwa a iji mezuo otu ọrụ.
Download PuTTY maka n'efu
Ka anyị lee ụfọdụ n'ime ha anya.
Cl SS SS Bitvise. Ngwa na ikikere n'efu maka Windows. Na-arụ ọrụ na SSH na SFTP. Na mgbakwunye na arụmọrụ, PuTTY na-enye onye ọrụ ahụ ohere dị mma, interface. Mgbe nhazi nke SSH njikọ, ọ ga-ekwe omume ịrụ ọrụ ma ọnụego ma na window ngosi, nke dị nnọọ mma
SecureCRT. Ngwaahịa nke ejire SSH na Telnet ahịa, yana emulator emetụ. Otu n'ime uru ya bụ nkwado nke ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị cipher maka njikọ ahụ, ikike iji WHS na atụmatụ ndị dị elu gbasara SSH, ya bụ nkwado nke onye nnyemaaka igodo ọha, kaadị ndị dị mma, X11 ebugharị
Ngwa na-eji PuTTY isi koodu
WinSCP. Ihe ngosi maka Windows. Jiri dị ka onye ọzọ si SFTP na SCP ahịa
Ogbu mmiri. Mmemme maka mmejuputa nke ikuku
IKE. Usoro PuTTY dị mma (maka Windows OS). Na mgbakwunye na ọrụ ọrụ nke mmemme ndị nne na nna, ọ nwere ike ịchekwa paswọọdụ ma mechie ihe odide logon.
O kwesiri iburu n'obi na nchebe nke njikọ mgbe ejiri analogs PuTTY emeghi ya
Nhọrọ nke okwu nke PuTTY dabeere na mkpa maka ọrụ a ma ọ bụ ọrụ ahụ. Ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ mmemme yiri nke ahụ, ọ dị nnọọ mfe ịhọrọ ihe ruru gị aka.